Coronavirus အစီအမံများအရ Yenimahalle-Şentepeကေဘယ်ကြိုးလိုင်းကိုခေတ္တပိတ်ထားသည်! | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီCoronavirus အစီအမံများအရ Yenimahalle-Şentepeကြိုးကြိုးလိုင်းကိုခေတ္တပိတ်ထားသည်!
21 / 03 / 2020 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, ကောင်းကင်ကြိုး, coronavirus, ခေါင်းစီးသတင်း, နောက်ဆုံးမိနစ်, တူရကီ, TELPHER
Corana ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Ankara ၌ကေဘယ်လ်ကားရပ်တန့်သွားသည်
Corana ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Ankara ၌ကေဘယ်ကြိုးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုရပ်တန့်လိုက်သည်။ ; တရုတ်နိုင်ငံ Wuhan တွင်ဖြစ်ပွားသော Corona ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအပြီးတွင် Ankara တွင်တင်းကြပ်သောအစီအမံများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Ankara Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Mansur Yavaşကသူ၏လူမှုမီဒီယာအကောင့်တွင်“ တစ်နေ့လျှင်ခရီးသည် ဦး ရေလျော့ကျခြင်းနှင့်လူမှုရေးအကွာအဝေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်အဆင်မပြေမှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ropeway လိုင်းကိုခေတ္တပိတ်ထားသည်။ သူကရှင်းပြသည်မှာကေဘယ်လ်ဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုရပ်တန့်သွားစေသည်။
Ankara မြို့ပြမြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Mansur Yavaşက "ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့နိုင်ငံသားတွေ၊ တစ်နေ့လျှင်ခရီးသည် ဦး ရေလျော့ကျခြင်းနှင့်လူမှုရေးအကွာအဝေးကိုထိန်းသိမ်းရန်အငှားယာဉ်များမသင့်လျော်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကေဘယ်လ်ကြိုးလိုင်းကိုခေတ္တပိတ်ထားသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေဖို့အတွက်ဖိုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘတ်စ်ကား ၂ စီးစတင်ပြေးဆွဲနေပြီ။ ” အသုံးပြုအသုံးအနှုန်းတွေ။
တစ်နေ့လျှင်ခရီးသည် ဦး ရေလျော့ကျခြင်းနှင့်လူမှုရေးအကွာအဝေးကိုထိန်းသိမ်းရန်လေယာဉ်များမစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကေဘယ်ကြိုးလိုင်းကိုခေတ္တပိတ်ထားသည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏2ဖိုဘတ်စ်ကားများစတင်ပြေးဆွဲနေပြီ။ pic.twitter.com/jfrunhgtsv
- Mansur Yavaş (@ mansuryavas06) မတ်လ 20, 2020
တူရကီ Kizilay မီထရိုဘူတာခဏတဖြုတ်ပိတ်သည်
EGO Cable Car Project Yenimahalle - Şentepeကေဘယ်လ်ကြိုးလိုင်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါyapım
ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူ Gone ထံမှ Yenimahalle-Şentepeကေဘယ်လ်ကားလိုင်း
Yenimahalle-Şentepe Cable ကိုကားလိုင်းအကြီးစားကို Maintenance နှင့် Repair ကနေရွှေ့ပြောင်း
cable ကိုကားတစ်စီးလိုင်း၏ Yenimahalle-Şentepeဘဏ္ဍာရေးစာအိတ်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တင်ဒါဖွင့်လှစ်
Yenimahalle-Şentepe Cable ကိုကားလိုင်းကို Maintenance တိုးချဲ့
Yenimahalle - cable ကိုကားတစ်စီးလိုင်းအတွက်Şentepeအမှား
အဆုံးမှာ Yenimahalle-Şentepeကေဘယ်လ်ကားလိုင်း xnumx.etab လာမယ့်မဟုတ်ပါ
Yenimahalle Sentepe Cable Car Line2အဆင့်
Yenimahalle - Şentepe Cable Car Line ဒုတိယအဆင့်စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါyıl